ओली–प्रचण्ड वार्ता : यस्तो छ एकताको मोडालिटी -
ओली–प्रचण्ड वार्ता : यस्तो छ एकताको मोडालिटी
E Naya Khabar Reporter २०७४ पुस १३ गते बिहीवार	| अन्तरवार्ता
वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच ओलीनिवास बालकोटमा सवा घन्टा छलफल भएको थियो । पार्टीमा दुवै प्रमुखको हैसियतमा रहने गरी एकताको मोडालिटीमा करिब–करिब सहमत भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व पाउने गरी नै दुई नेताबीच करिब–करिब समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ । त्यस निम्ति अध्यक्ष र सहअध्यक्ष पद रहने कि, दुई वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हुने गरी तयारी समिति बनाएर जाने भन्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । ‘मूल कुरा एकताको स्पिरिटअनुसार नै प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिने गरी नै करिब–करिब समझदारी भइसकेको छ । नयाँ सरकार गठनलाई ढिलाइ गरेर अड्काउने खेल भएकाले मात्रै संयोजन समितिको बैठक बस्न पनि ढिलाइ भइरहेको हो,’ एमालेका एक उच्च नेताले भने ।
वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता र नयाँ सरकार गठन प्याकेजमै टुंग्याउने समझदारी गरेका छन् । पार्टी एकताबारे संशय उत्पन्न गराउने गरी अनावश्यक भ्रम फैलाइएको निष्कर्ष निकाल्दै ओली र प्रचण्डले बुधबार एकता र सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै टुंग्याउने समझदारी गरेका हुन् । एकता र सरकार गठन एउटै प्याकेजमा टुंग्याउने विभिन्न ‘मोडालिटी’का छलफललाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मार्गप्रशस्तका लागि दबाब दिनुपर्ने दुवै नेताको निष्कर्ष छ । देउवाकै कारण नयाँ सरकार गठनलगायत प्रक्रिया अड्किएको भन्दै मार्गप्रशस्तका लागि विलम्ब नगर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूको तयारी छ ।
169 पटक हेरिएकाे
पछिल्लाे - मेस्सी बने २०१७ को उत्कृष्ट फूटबलर, तर किन नेइमार र रोनाल्डो छायांमा परे ?
अघिल्लाे - नेपाली महिलाको प्रजननदर दोब्बरले घट्यो
वाम एकता देशको आवस्यकता र जनताको चाहना हो ः मोहन खत्री इन्चार्ज पुर्व माओवादी केन्द्र उदयपुर
यहाँ नबगठित कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिमा नपरेकोमा आक्रोशित हुनु भएको हो ?...
अमेरिकी रिपब्लिकनहरुको अखबार ‘शिकागो ट्रिब्युन’ का एक सम्वाददाताले कार्ल माक्ससँग उनको लण्डनस्थित...
वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार भेटवार्ता...
स्वतन्त्र सांसद भनेर भन्दा आत्मा दुख्दो रहेछ–संसद मगर
नारायण बहादुर बुर्जा मगरको जन्म २०२१ साल बैशाख ५ गते बुबा ललित...
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई हामीले दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहेर...
उत्तर कोरियाको विषयमा अमेरिका र रुसको फोन वार्ता
एजेन्सी उत्तर कोरियाका कारण कोरियाली प्रायद्वीपमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका बारेमा अमेरिकी...